Maxaa Sacuudiga loola xiriiriyay isku daygii afgembi ee la sheegay inuu ka dhacay Urdun? | Saxil News Network
Maxaa Sacuudiga loola xiriiriyay isku daygii afgembi ee la sheegay inuu ka dhacay Urdun?
Riyadd (Saxilnews.com)-Saraakiisha dalka Sacuudiga ayaa gabi ahaanba gaashaanka u daruuray warar sheegayay in ay ku door ku leeyihiin isku day afgembi oo la sheegay in uu ka dhan ahaa boqortooyada Urdun.
Sabtidii dhaxal sugihii hore ee Urdun Xamzah ayaa xabsi guri laga dhigay waxaana lagu eedeeyay in uu minja-xaabinayo amniga qaranka.
Arrintan ayaa timid ka dib markii uu Xamza ka qeyb galay kulan ay lahaayen mid ka mid ah beelaha daga Urudun kaasi oo si cad loogu cambaareeyay boqor Cabdalla.
Xamzah ayaa ka dib soo saaray 2 muuqaal oo uu BBC la wadaagay isaga oo dowladda dalkiisa ku eedeeyay musuqmaasuq iyo waxqabad la’aan.
Waxaa muuqaaladaasi ku sheegay in dadka ay ka baqayaan inay arrintan ka hadlaan iyaga ka baqaya in ay dhibaateeyaan ciidamada ammaanka.
Tan iyo wixii ka dambeeyay muuqaalka uu soo saaray xaaladda ayaa la dajiyay ka dib dhexdhexaadin uu gar wadeen ka ahaa boqorka adeerkii.
Balse tan iyo xilligaasi waxaa soo baxayay warar la isla dhex marayay oo sheegayay doorka Sacuudiga ee xasaradan ka taagan Urdun.
Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga, amiir Faisal bin Farhan, ayaa u duulay caasimada Urdu ee Camaan isaga o ay la socdaan ergo kale.
Waxaa uu muujiyay in Sacuudiga “ay si buuxda u garab taagan yihiin dowladda boqor cabdalla “.
Waxaa sidoo kale saraakiisha Sacuudiga ay intaa ku dareen in go’aanka Sacuudiga uu kaasi yahay islamarkana wararka sheegaya inay Sacuudiga ku lug leeyihiin isku dayga in xasilooni daro laga abuuro dalkan yar ee ay dariska yihiin ay tahay “wax aan micno ku fadhin ooo aan loo meel dayin “.
Boqorka Sacuudiga oo ka carooday ammaan xad dhaaf ah oo loo jeediyey.
‘Boqorka Cuudka’ Soomaalida ee Coronavirus sahayday
Boqorka Urdun oo walaalkii oo uu ka shakiyey xidhay
Qoraalka sawirka,Nin sida sawirka boqorka Rurdun
Hadaba maxaa Sacuudiga loola xiriiriyay dhacdadan?
Markii ay mashaqadan soo ifbaxday toddobaadkan, saraakisha Urdun waxay sheegeen inay si dhaw ula socdaan dhaqdhaqaaqa amiir Hamzah iyo tiro kale oo saraakiil ah.
Waxay saraakiisha Urdun ay ka hadleen in arrintan ay ku lug leeyihiin ” shaqsiyaad ajnabi ah” oo aysan carab-baabin cida ay yihin, taasi oo uu beeniyay amiir Xamza.
Waxaa jira labo arrimood oo kala duwan oo xiisadan la xiriirta.
Midda kowaad waa amiir Hamzah, oo ah wiilka ugu wayn caruurta boqor Hussein, kaasi oo hadal uu dhawaan u jeediyay mid ka mid ah beelaha ay dhibsadeen saraakiisha ammaanka Urdun.
Arrinta kale ayaa ah saraakiil kale oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin ugu yaraan dal kale.
Mid ka mid ah dadka caanka ah ee la xiray ayaa waxaa lagu magacaabaa Bassem Awadallah, oo horey uga tirsanaa qoyska boqortooyada Urdun islamarkana imika ah la taliyaha dhanka dhaqaalaha ee dhaxal-sugaha Sacudiga Maxamed bin Salman.
Awadallah ayaa haysta labo dhlasho oo kala ah Sacuudiga iyo tan Urdun.
Wargeyska Washington Post ayaa ku waramay in ergada wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ay diideen in ay Urdun ka tagaan iyaga oo uusan la socon Bassem Awadallah.
Balse saraakiisha Sacuudiga ayaa dhankooda warkan beeniyay.
Bassem Awadullah waxaa uu leeyahay xiriiro awood badan oo heer caalami ah.
Waxay aad isugu dhaw yihiin dhaxal-sugaha Sacuudiga iyo sidoo kale dhaxal-sugaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed.